MB 2017 Mey - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Mey
Indraindray aho dia miresaka amin'ireo mpino izay mahita fa sarotra ny mahazo ny antony hoe Andriamanitra Fanahy Masina, toa ny Ray sy ny Zanaka dia Andriamanitra - iray amin'ny olona telo ny Trinite. Matetika aho dia mampiasa ohatra ao amin'ny soratra masina mba hampisehoana ireo toetra sy fihetsika izay mamantatra ny Ray sy ny Zanaka amin'ny maha-olona ary ny Fanahy Masina dia voaresaka mitovy amin'ny olona iray. Avy eo dia notononiko ireo anarana marobe ampiasaina ilazana ny Fanahy Masina ao amin'ny Baiboly. Ary farany, miditra amin'ny fampianaran'i Jesosy momba ny Fanahy Masina aho. Amin'ity taratasy ity dia hifantoka amin'ny fampianarany aho.
Ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona, i Jesoa dia miresaka ny amin’ny Fanahy Masina amin’ny fomba telo: ny Fanahy Masina, ny Fanahin’ny fahamarinana, ary ny Paraklētos (teny grika nomena amin’ny fandikan-tenin’ny Baiboly isan-karazany ho mpisolovava, mpanolo-tsaina, mpanampy, ary mpampionona). Asehon’ny Soratra Masina fa tsy ny Fanahy Masina no hitan’i Jesosy ho loharanon-kery fotsiny. Ny teny hoe paraklētos dia midika hoe "olona mijoro" ary amin'ny ankapobeny dia lazaina amin'ny literatiora grika hoe olona misolo tena sy miaro olona amin'ny raharaha iray. Ao amin’ny asa soratr’i Jaona, i Jesosy dia manondro ny tenany ho paraklētos ary mampiasa io teny io ihany koa mba hilazana ny Fanahy Masina.
Nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy ny hariva talohan’ny hamonoana azy fa handao azy ireo izy3,33), nefa nampanantena fa tsy hamela azy ireo “ho kamboty” (Jaona 14,18). Ho solon’izany, dia nampanantena izy fa hangataka amin’ilay raim-pianakaviana mba haniraka “mpionona hafa [Paraklētos]” mba hiaraka amin’izy ireo (Jaona 1.4,16). Tamin’ny fitenenana hoe “hafa” i Jesosy dia nilaza fa misy ny voalohany (ny tenany) ary ny fahatongavana, tahaka ny tenany, dia ho olon’Andriamanitra ao amin’ny Trinite, fa tsy hery fotsiny. Jesosy dia nanompo azy ireo ho Paraclete - teo anatrehany (na dia tao anatin'ny tafio-drivotra mahery aza) dia nahita herim-po sy hery ny mpianatra handao ny "faritra fampiononana" mba hanatevin-daharana ny fanompoany ho tombontsoan'ny olombelona rehetra. Efa akaiky izao ny fanaovam-beloma an’i Jesosy, ary azo inoana fa nalahelo mafy izy ireo. Hatramin’izay fotoana izay, Jesosy no Paraklētosan’ny mpianatra (jereo 1. Johannes 2,1izay ilazana an’i Jesosy ho «Mpanelanelana» [Paraklētos]). Aorian'izany (indrindra fa aorian'ny Pentekosta) dia ny Fanahy Masina no ho mpisolovava azy ireo - mpanoro hevitra, mpampionona, mpanampy ary mpampianatra. Izay nampanantenain’i Jesosy ny mpianany sy izay nirahin’ny Ray dia tsy hery fotsiny, fa olona iray – ilay olona fahatelo amin’ny Trinite, izay ny fanompoany dia ny hiaraka sy hitarika ny mpianatra amin’ny lalan’ny Kristiana.
Hitantsika ny asa fanompoana manokan’ny Fanahy Masina manerana ny Baiboly: in 1. Mosesy 1: nitsinkafona teo ambonin’ny rano izy; ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka: nanaloka an’i Maria izy. In-56 izy no voatonona ao amin’ny Filazantsara efatra, in-57 ao amin’ny Asan’ny Apostoly ary in-112 ao amin’ny taratasin’ny apostoly Paoly. Hitantsika ao amin’ireo soratra masina ireo ny asan’ny Fanahy Masina amin’ny maha-olona amin’ny fomba maro samihafa: fampiononana, fampianarana, fitarihana, fampitandremana; amin'ny fifantenana sy ny fanomezana fanomezana, ho fanampiana amin'ny vavaka tsy manan-kery; manamafy antsika ho zanaka natsangana, manafaka antsika hiantso an’Andriamanitra ho Abba (Raintsika) tahaka ny nataon’i Jesosy. Araho ny fitarihan’i Jesosy: fa rehefa tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny fahamarinana rehetra. Satria tsy miteny ho azy izy; fa izay ho reny no holazainy, ary izay ho avy no hambarany aminao. Hanome voninahitra Ahy Izy; fa haka amin'izay Ahy Izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra ananan'ny ray dia ahy. Izany no nilazako hoe: Izy handray izay Ahy ka hanambara izany aminareo (Jaona 16,13- iray).
Amin’ny fiombonana amin’ny Ray sy ny Zanaka dia manana andraikitra manokana ny Fanahy Masina. Tsy niteny avy amin’ny tenany izy, fa nanondro ny olona ho amin’i Jesosy, izay nitondra azy ireo ho any amin’ny Ray. Raha tokony hanao ny sitrapony ny Fanahy Masina dia manaiky ny sitrapon’ny Ray araka izay ambaran’ny Zanaka. Ny sitrapon’Andriamanitra tokana, tokana, telo izay iray, dia avy amin’ny Ray amin’ny alalan’ny Teny (Jesosy) ary tanterahina amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Afaka mifaly sy mahazo fanampiana avy amin’ny fanatrehan’Andriamanitra manokana isika ankehitriny amin’ny asan’ny Fanahy Masina, ny Paraklētos antsika. Ny fanompoantsika sy ny fanompoantsika dia an'Andriamanitra Telo Izay Iray, ao amin'ny Olona telo, iray amin'ny maha-izy azy, miasa, maniry ary mikendry. Misaotra ny Fanahy Masina sy ny asany.
Lohatenin'ny Fanahy Masina ao amin'ny Baiboly
Fanahy Masina (Salamo 51,13; Efesianina 1,13)
Fanahin’ny torohevitra sy hery (Isaia 11,2)
Fanahin’ny fitsarana (Isaia 4,4)
Fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah (Isaia 11,2)
Fanahin’ny fahasoavana sy ny vavaka [fifonana] (Zakaria 12,10)
Herin’ny Avo Indrindra (Lio 1,35)
Fanahin'Andriamanitra (1. Korintiana 3,16)
Fanahin’i Kristy (Romana 8,9)
Fanahin’Andriamanitra Mandrakizay (Hebreo 9,14)
Fanahin’ny fahamarinana (Jaona 16,13)
Fanahin’ny fahasoavana (Hebreo 10,29)
Fanahin'ny voninahitra (1. Petrus 4,14)
Fanahin’ny fiainana (Romana 8,2)
Fanahin’ny fahendrena sy ny fanambarana (Efesiana 1,17)
Ilay Mpananatra (Jaona 14,26)
Ny Fanahin’ny Fampanantenana (Asa 1,4-5)
Fanahin'ny zanaka [fanampiana] (Romana 8,15)
Fanahin’ny fahamasinana (Romana 1,4)
Fanahin'ny finoana (2. Korintiana 4,13)